musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi Venhabvu veDutch Virgil van Dijk Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeChishanu yeBhola inonyanya kuzivikanwa neNickname; 'Vig'. Mhandara yedu van Dijk Childhood Indaba neBiography Fact inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri, hukama hwehukama uye dzakawanda OFF-Pitch zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvekwaniso yake asi vashomanana vanofunga kuti Virgil van Dijk Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Virgil van Dijk Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Virgil van Dijk akaberekwa musi we 8th waJuly 1991, muBreda, Netherlands. Iye ndiye Kanzera kuburikidza nekuberekwa. Akaberekerwa nababa vechiDutch (Ray Van Dyke) uye amai veSurinamese (Ruby Van Dyke). Virgil rinotarisa zvakadai saamai vake vakanaka, kusiyana nababa vake.
Chizvarwa cha Virgil chakazvarwa chakakundikana mushure menguva yakawanda yekuedza kutsvaga basa rake paWillem II.
Aionekwa sechinonoka uye chiduku. Izvi zvakateverwa naiye ari muchipatara nekuda kwechipfuva chemuviri chinotyisa chaaiva nacho. Mavanga anoramba achiripo kusvikira zuva rakakurumbira mumudumbu wake wepasi.
Nenzira yekuti, akadzoka kubva pamimba yake nekukura kwezvinetso. Mafungiro a Virgil uye kukura mushure mokunge vadzikinura zvakanyanyisa. Kuvabereki vake, chaiva chishamiso. Izvi zvakaona kutanga kubudirira kwebasa rake.
Virgil akafamba 255 km kubva kumusha wekwo Breda to Groningen uyo akamupa foni yake yekutanga kubhola. Mushure mokuva mutambi wechikoro, akatamira kune Celtic mu2013, uko akakunda Scottish Premiership. Akatumidzwa muPFA Scotland Team yegore mumakore ake maviri, uyewo akakunda Scottish League Cup mumashure.
Muna September 2015, akabatana Southampton. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Virgil van Dijk Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Mukugadzira ukama hwenguva refu, Virgil akaenda kune mukadzi waaidavira kuti haasati akatendeka uyewo, mumwe munhu angamira naye mumamiriro ese ezvinhu.
Virgil nemusikana wake Rike vari vezera rimwechete nenyika (The Netherlands). Vanga vari kufambidzana kubva paudiki hwavo nguva.
Virgil uye rudo rwehupenyu hwake, Rike Nooitgedagt
Rike Nooitgedagt ndiro rave rakabatsira Virgil kupinda muhupenyu hutsva kubva panguva yake muWillem II. Akave akarumbidzwa nokuda kwekusiya basa rake rine simba rakakura kuti aende nerudo rweupenyu hwake kuScotland neBrithani.
Rike akambotaura mune imwe hurukuro: "Ndinoshushikanaked sevatengesi vekutengesa uye vakatengesa mafashoni akasiyana-siyana kuzvinhu zvekuHolland. Ndaifarira asi ndaifanira kurega kuti nditevere murume wangu kwose kwose kwebhora rinomutora. Kusvika ikozvino, tave tichigadzirisa zvakanaka uye tine mikana neimba yedu yakanaka. "
Virgil, Rike uye imbwa yavo yakanaka
Rike iye zvino ari mukadzi wenguva yakazara yebhola uye Wag. Munguva pfupi yapfuura, Virgil akazarura pachena rudo rwake panguva yezororo ravo rekare. Akaisa mufananidzo wekusimudza shamwari yake yebhaini-akavhara patsoka dzake ndokunyora kuti: "Ndiwe rudo rwehupenyu hwangu!".
Mune chimwe chiratidzo chekuratidzwa kwevanhu, Rike yakatumira: "Ini handikudi chete kuti ndiwe ani asi ini wandinenge ndiripo pandinewe. "
Virgil van Dijk Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -National Team pamberi Mwana
Vaviri vacho vakava nemwana wavo wokutanga mu2014: mwanasikana uyo Virgil anofarira zvikuru sekuonekwa mumufananidzo uri pasi apa.
Virgil anosimudzira mwanasikana wake kumatenga
Kuberekwa kwechecheche wavo chaive chiitiko. Panguva iyo Rike yaifanira kuitika munaSeptember 2014, van Dijk, pakupedzisira, vakawana kukokwa ikoko kuna Netherlands national football team akanga aida chaizvo. Uyezve, mutsigiri uyu akanga asingadi kupotsa kuberekwa kwemwanasikana wake. Saka akaitei?
Virgil akaronga kuti musikana wake vasati vabereke mwanasikana wavo. Izvi zvakatsoropodzwa nevafumi kunyange Netharenzi mutungamiri, Guus Hiddink uyo akamudana.
Zvaakaita chisarudzo chisina kufanira, nemesis akabatwa naye. Guus Hiddink haana kumusarudza iye anonzi anotarisirwa kutarisana.
Virgil van Dijk Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Kunyengera paMusikana Wake
Yakavimbiswa kuti Virgil van Dijk akambonyengedza paRive apo akanga ane pamuviri. Anonzi akapa mari yeGeorgia Lyall kuti avate naye.
Georgie akasangana neDutch ace van Dijk maawa mushure mekunge apemberera chikwata cheCeltic chikwata chekukunda pamwe neshamwari Rike Nooitgedagt kuParkhead.
Mhedziso yekuonana neGeorgie uyo akazadza pfungwa dzake paaipedza nguva neRike munguva yake yekupemberera. Imwe nyanzvi yakaratidza kuti vaviri ava vaisangana zuva rakasati rasvika jubilant Celtic squad vakaisa maoko avo pamusoro pesirivhaware.
Rudo ramba Virgil naGeorgie vaiva nevanotevera cheat text vasati vasangana pahotera yakabvumirana.
Mifananidzo inotevera yakabuda iyo yakazarurwa kare uye mushure mokunge yapera, kupedzisa pachavo pahotera yehotera.
Yaiva Georgie Lyall uyo akasarudza kuitumidza kuti kurega mushure mokufunga kushandura mararamiro ake. Izvi zvakaitika mushure mokunge agamuchira yunivhesiti kupa chipo chokudzidza mukoti.
Mumashoko ake ...: "Ndakagamuchirwa nokuda kwechiremba chekuyamwisa. Kuchechera chinhu chandaimbogara ndichida kuita. Ini ndakarohwa mumakambani makuru apo ndaiva muduku. Ndakanga ndiri mairi kwemakore anenge mashanu - asi ndine zvinhu zvose zvandakabva "
Akaenderera mberi ... "Iye zvino ndave wakakura zvakakwana kuti ndive nemusoro wepamusoro uye ndipe zvose zvandinofanira kudzidza, kuwana dhigirii uye kuita chimwe chinhu chinokosha."
Izvi zvakateverwa nekubvisa mabhizimisi ake ehupfumi. Anomiririra kuti haazvidemba
pamusoro pekudarika kwake kwekare uye zvakare pakusangana Virgil.
VaDutchman mushure mokunge vabatwa vakati vakanga vamuvhura kubva kune imwe nhoroondo yaaida
ndeyomumwe shamwari. Yakanga isiri pasi pevhiki mbiri mushure mokunge Rike asingafungi akamuudza kuti akanga achitarisira mwana. Mishumo ichangobva kutaurwa inoti iye zvino akachinja munhu.
Virgil van Dijk Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Rimwe Rakadanwa Sokumhanya
Van Dijk unyanzvi hwehutano hwaive huripo kubva pakuonekwa kwake kwekutanga sevhizimisi webhola. Akamboshandiswa semutsotsi wekukurumidzira kwekambani yake yekutanga Groningen. Akatungamirira boka rake mune 4-2 kukunda ADO Den Haag muna April 2011.
Akakurumidza kudzoserwa kunzvimbo yake chaiyo yekudzivirira, uye akakurumidza kuzviisa pasi seimwe yevimbisi vechidiki vanovimbiswa munyika yebhola.
Virgil van Dijk Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Muvengi Wake Akakosha
VIirgil van Dijk akabvuma kutarisana Anthony Martial hazvisi kufanana neChrisish Premiership.
Martial rimwechete akabatsira Virgin van Dijk mushure mokunge mudziviriri ane chirwere chepakamu
Izvi zvakaitika mushure mekunge mutsigiri wechiDutch ainge atsekwa neAfora sezvo Manchester United yakakunda 3-2 paSt Mary's. Martial kunyange vakatora tsitsi kuna Van Dijk ndokumubatsira nechirwere chake vasati vapera.
Virgil van Dijk Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Faith
Virgil muKristu nerutendo. Anosika nguva yakakosha yekunyengeterera mhuri yake, musikana uye vanhu vandinoda. Kunyange zvazvo asingaendi kuenda kuchechi.
Mumashoko ake ...'Pandakanga ndichiri muduku ndaipinda kuchechi musi weSvondo woga woga uye apo ini ndakwegura ndakamira. Asi dzimwe nguva ndinonyengetera uye ndinonzwa kuti yakandibatsira munguva dzakaoma. '
Virgil van Dijk Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Zodiac Trait
Virgil van Dijk ane chirwere uye ane zvirevo zvinotevera kumunhu hwake;
Virgil van Dijk's Strengths: Anononoka, anofungidzira zvikuru, akavimbika, ane tsitsi, anonzwira tsitsi, anonyengetedza.
Virgil van Dijk Kushayiwa simba: Moody, kusava nechokwadi, kunyungira, kunyengera, kusachengeteka.
Zvakaita Virgil van Dijk Anofarira: Art, pamba-shanduko yekuzvivaraidza, kusununguka pedyo kana mumvura, kubatsira vanodiwa, kudya kwakanaka neshamwari.
Zvinonzi Virgil van Dijk Haafariri: Vatorwa, chero kushorwa kwaamai vake uye nekuratidza hupenyu hwehupenyu hwega.
Tinovonga nekuverenga Virgil van Dijk Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!